(L) ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်စင်တာတွင်သဘာဝနှင့်ပျိုးထောင်မှု၊
ဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ်စင်တာ (2012) တွင်ဆိတ်ကွယ်ရာ teased (L) သဘာဝတရားနှင့်ပွား
ပေစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့လေ့လာမှုထိုကဲ့သို့သော schizophrenia, စွဲလမ်းနှင့်ပါကင်ဆန်ရောဂါအဖြစ်မမှန်သို့အနာဂတ်သုတေသနအတွက်အရေးကြီးသောသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
Eliot Barford အားဖြင့်
Imperial College London မှသိပ္ပံပညာရှင်များအားဖြင့်တစ်ဦးကလေ့လာမှုထိုကဲ့သို့သော schizophrenia, စွဲလမ်းနှင့်ပါကင်ဆန်ရောဂါအဖြစ်မမှန်သို့အနာဂတ်သုတေသနအတွက်အရေးကြီးသောသက်ရောက်မှုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြုအမူအတွက်အခန်းကဏ္ဍသဘာဝနှင့်ပွားကစားသို့မကြုံစဖူးထိုးထွင်းသိမြင်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။
ဒေါက်တာရှင်ပေါလု Stokes ၏ ဆေးပညာဦးစီးဌာန နှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်း ဦး နှောက်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် ဦး နှောက်ဓာတုဓါတုဗေဒ dopamine ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုင်းတာခဲ့သည်။ Dopamine ကိုအပျော်တမ်းဓာတုပစ္စည်းအဖြစ်နာမည်ကြီးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည် ဦး နှောက်ထဲတွင်ဆုလာဘ်နှင့်အတူထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ စတိုကဤသို့ပြောပြသည် -“ လူတွေကမူးယစ်ဆေးဝါးသောက်တာ၊ အရက်သေစာသောက်တာတွေလုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာစိတ်ကျေနပ်မှုရစေတယ်။ ဤဓာတုဗေဒဆိုင်ရာဆုလာဘ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြုအမူကိုလမ်းညွှန်ပေးပြီးသင်ကြားရန်ကူညီသည်။ “ Dopamine သည် ဦး နှောက်အတွင်းရှိပုံမှန်ဖြစ်စဉ်များအတွက်သာမကပုံမှန်မဟုတ်သောဖြစ်စဉ်များအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။
ဦးနှောက်အတွက် Dopamine လွှတ်ပေးရန်လူတိုင်းအတွက်အကြားကွဲပြားခြားနားသည်, ဒါပေမယ့်အလွန်မြင့်မားသို့မဟုတ်အနိမ့်ပမာဏစိတ်ရောဂါနဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်: အနည်းငယ်သာအရက်နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်ရှိသူများတွင်တွေ့မြင်နေအလွန်အကျွံ dopamine လွှတ်ပေးရန်, schizophrenia နှင့်အတူလူကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ dopamine function ကိုတစ်ဦးလိုငွေပြမှုလည်းပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူလူများ၏နှေးကွေးအလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်စေဖို့စဉ်းစားထားသည်။
အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်နေဆဲ dopamine လှုပ်ရှားမှုတွင်ဤအပြောင်းအလဲများကိုစိတ်ရောဂါဒါမှမဟုတ်၏ရလဒ်များ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်ကြောင်း, ဒါပေမယ့်ဖြေရှင်းဖို့အဆိုးဝါးဆုံးနက်နဲသောအရာတို့ကိုတဦးတည်းကိုသူတို့အမွေဆက်ခံသို့မဟုတ်ကြသည်မဟုတ်ရှိမရှိဟုတ်မဟုတ် deducing နေကြသည်။ ယခုကြှနျုပျတို့ schizophrenia အမွေဆက်ခံနိုင်ကိုသိသည့်အတိုင်းအလုပ်မဖြစ် dopamine လှုပ်ရှားမှုကိုလည်းမိသားစုများအတွက် run နိုင်တဲ့ဖြစ်နိုင်ချေအတွက်အများကြီးစိတ်ဝင်စားမှုရှိပါတယ်။ အဖြေအနာဂတျမှာကုသပါလိမ့်မည်ကိုမည်သို့ထိုကဲ့သို့သောရောဂါများအပေါ်ကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါလိမ့်မယ်။ "ဗီဇနှင့်ပတ်ဝန်းကျင် dopamine သည့်စနစ်တခုတခုအပေါ်မှာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိပုံကိုနားလည်ခြင်းသည်အလွန်အရေးပါသည်" Stokes ကပြောပါတယ်။
အဆိုပါ striatum ဦးနှောက်၏ဗဟိုအနီးတည်ရှိသည်။ (Image: ဘဝကသိပ္ပံ Databases (LSDB))
Dopamine ဟာ striatum လို့ခေါ်တဲ့ဦးနှောက်, သင့်ဦးနှောက်၏ဗဟိုနီးပါးသင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံတစ်ဦး roundish စိမ်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိ၎င်း၏အလုပ်ကိုအများစုပါပဲ။ "ဒီ striatum လွန်းတဲ့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သေးငယ်တဲ့ဦးနှောက်ဧရိယာ, ဒါပေမယ့်အကျိုးသည်အလွန်အရေးကြီးပါသည်, စိတ်လှုပ်ရှားမှု, အချို့သိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်" ဟု Stokes ကရှင်းပြသည်။ အဆိုပါ striatum ကွဲပြားခြားနားသောတာဝန်များကိုနှင့်အတူသုံးပိုင်းအတွင်းထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ limbic striatum ဆုလာဘ်ကပေးလှုံ့ဆျောမှု၏အဓိပ္ပာယ်အိမ်ရှင်အဖြစ်။ အဆိုပါ sensorimotor striatum လှုပ်ရှားမှုအုပ်ချုပ်ကူညီပေးသည်နေစဉ်, မှတ်ဉာဏ်နှင့်အခြားစဉ်းစားတွေးခေါ်ဖြစ်စဉ်များအလုပ်လုပ် The Associated striatum ထိန်းချုပ်မှု။ Stokes နှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များသီးခြားစီသုံးခုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီထည့်သွင်းစဉ်းစား။
သူတို့၏ဆန်းသစ်သောလေ့လာမှုဒီဇိုင်းတွင် PET scan ပုံစံတစ်မျိုးပါဝင်သည်။ PET သည်ရေဒီယိုသတ္တိကြွသောပမာဏအနည်းငယ်ကိုအရာဝတ္ထုတစ်ခု၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိမြင့်မားသော resolution ဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး 3D ပုံစံသို့ပေါင်းစည်းနိုင်သော“ အချပ်များ” ကိုပေးသည်။ ဒီရေဒီယိုသတ္တိကြွမှုကဘာသာရပ်ထဲကိုထိုးသွင်းတဲ့ tracer ကလာတာ။ ဒီလေ့လာမှုမှာသိပ္ပံပညာရှင်တွေက F-DOPA ဓာတုဗေဒကိုသုံးပြီး dopamine function ကိုညွှန်ပြတဲ့ဓာတုပစ္စည်းကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်။ F-DOPA ကို ဦး နှောက်တွင်းရှိ dopamine အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီး dopamine ထုတ်လွှတ်သည့်အခါ PET scan က dopamine ၏လုပ်ဆောင်မှုသည်အမွှာ ဦး နှောက်တွင်မည်သည့်နေရာ၌ရှိသည်ကိုဖော်ပြသည်။
အမွှာမှာရှာနေမကြာခဏအခြားမည်သည့်လမ်း unobtainable ကြောင်းအမွေဥစ္စာကိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပေးစွမ်းသည်။ အမွှာအတိအကျတူညီ DNA ကိုရှိသည်ကြောင့်, သူတို့ကိုအကြားခြားနားချက်များသူတို့ရဲ့ဗီဇနဲ့ဘာမှရှိသည်။ သင်တစ်ဦးရို၏ဘယ်လောက်ခန့်မှန်းနိုင်, အမြင့်သို့မဟုတ်ထောက်လှမ်းရေးနဲ့တူပါကအမွှာအတွက်ဘယ်လောက်ဆင်တူထွက်ရှာတွေ့သဖြင့်အမွေဆက်ခံသည်။ ဥပမာ, အမြင့်မြင့်မား heritable ဖြစ်ပါသည် - အမွှာများသောအားဖြင့်အကြောင်းကိုအညီအမျှရှည်များမှာ - ထောက်လှမ်းရေးအတော်လေး heritable ဖြစ်ပြီးအမွှာမကြာခဏကွဲပြားခြားနားသောနောက်ပြီး IQ ရှိနေစဉ်။
အမွှာလေ့လာမှုများကဲ့သို့ပင်ဒီတစ်ခုသည်တူညီခြင်းနှင့်မတူသောအမွှာများကိုနှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ မတူသောအမွှာများသည်အခြားအစ်ကိုသို့မဟုတ်အစ်မစုံတွဲများကဲ့သို့သူတို့၏ DNA ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုမျှဝေသည်၊ သို့သော်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူတို့မွေးဖွားလာသောအမွှာအမွှာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုကောင်းသည်။ Stokes နှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်အမွှာတွဲများ၏ ဦး နှောက်အတွင်းရှိ dopamine လုပ်ဆောင်ချက်ကိုနှိုင်းယှဉ်လေ့လာခဲ့ကြပြီး၊ ကွဲပြားခြားနားချက်သည်၎င်းတို့၏မျိုးဗီဇနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများမည်မျှရှိသည်ကိုခန့်မှန်းရန်စာရင်းအင်းပုံစံများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်အဓိကကောက်ချက်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ပထမဦးစွာယင်းမျိုးဗီဇအမွေဥစ္စာကိုအသီးအသီးထူးခြားသောစေသောတစ်ဦးချင်းစီအတှေ့အကွုံပု striatum အတွက် dopamine function ကိုတခုတခုအပေါ်မှာအရေးကြီးသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။ "ဒီပုံမှန်အားဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သို့မဟုတ်အစောပိုင်းလူကြီးအတွက်အသက်တာ၌နောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွေ့အကြုံများနေကြတယ်" ဟု Stokes ကရှင်းပြသည်။ ဆနျ့ကငျြ, မိသားစုပတ်ဝန်းကျင်တွင်အချက်များတစ်အိမ်မှာမျှဝေခြင်းနှင့်အတူတူတက်ကြီးထွားလာ၏အတွေ့အကြုံကိုကဲ့သို့အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိပါတယ်။
ဒုတိယအချက်မှာဆုချီးမြှင့်ခြင်းနှင့်လှုံ့ဆျောခြင်းအတွက်အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော limbic striatum သည်အခြားအတွေ့အကြုံများထက်ထိုအတွေ့အကြုံများအပေါ်များစွာသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဤအချက်ကစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတာကဖျော်ဖြေရေးစင်တာနှင့်သူလမ်းညွှန်သောအပြုအမူများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဗီဇများထက်ဘဝအတွေ့အကြုံများဖြင့်အများအားဖြင့်ထွင်းထုထားသည်။ ဤသည် dopamine လုပ်ဆောင်ချက်သည်ရိုးရှင်းစွာအမွေဆက်ခံနိုင်သည်ဟူသောယခင်ယူဆချက်များကိုစိန်ခေါ်စေသောကြောင့် schizophrenia နှင့်စွဲလမ်းမှုများ၏အကြောင်းရင်းများကို ပို၍ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်စေသည်။
Stokes မှဤတွေ့ရှိချက်သည် ဦး နှောက်၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းပုံရိပ်များကို အသုံးပြု၍ အနာဂတ်သုတေသနကိုအကြောင်းကြားလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ "ငါလုပ်ချင်တာကရောဂါရှာဖွေခြင်း၊ ကုသခြင်းနဲ့ရလဒ်ရလဒ်တွေအတွက် PET ကိုပိုပြီးအသုံးဝင်အောင်လုပ်ဖို့ပါ။ " St London သည်အနောက်လန်ဒန်မြို့ရှိစိတ်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့တစ်ခု၏အတိုင်ပင်ခံစိတ်ပညာရှင်တစ် ဦး အနေဖြင့်သူ၏ပုံရိပ်လေ့လာမှုများကိုသူ၏လက်တွေ့စောင့်ရှောက်မှုသို့ပြန်လည်ကျရောက်စေလိုသည်။ သူ၏ဆေးခန်းမှလူနာများကိုသူ၏လေ့လာမှုများအဖြစ်သို့ထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်သူသည်၎င်းအားသူ၏သုတေသနမှရရှိသောသိပ္ပံနည်းကျရောဂါနှင့်ကုထုံးတိုးတက်မှုမှပထမဆုံးအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေလိုသည်။
ဤသုတေသနမှတစ်ဦးထောက်ပံ့ကြေးကထောက်ခံခဲ့သည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနကောင်စီ နှင့်နေသည် ဂျာနယ်ထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ Neuropsychopharmacology.
PRA Stokes et al ။ "သဘာဝသို့မဟုတ်ပျိုးထောင်? တစ်ခု: လူ့ Striatal Dopamine ရာထူးအမည်များ၏ Heritability အဆုံးအဖြတ် [18F]-DOPA PET လေ့လာမှု” Neuropsychopharmacology ၂၀၁၂ အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်တွင်အွန်လိုင်းထုတ်ဝေမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ Doi: 10.1038 / npp.2012.207